Fepetram-pivoarana lehibe tokony harahin'ny mpanatanteraka rehetra. Martech Zone
Fepetram-pivoarana lehibe tokony harahin'ny mpanatanteraka rehetra
Alarobia, Martsa 6, 2019 Alarobia, Martsa 6, 2019 Ravi Chalaka
Mpivarotra efa za-draharaha no mahatakatra ny tombony azo avy amin'ny hetsika. Manokana, amin'ny habaka B2B, ny hetsika dia mitarika fitarihana betsaka kokoa noho ny hetsika marketing hafa. Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny fitarihana dia tsy mivadika fivarotana, ka mamela fanamby ho an'ny mpivarotra hamoaka KPI fanampiny hanaporofoana ny sandan'ny fampiasam-bola amin'ny hetsika ho avy.
Raha tokony hifantoka tanteraka amin'ny fitarihana izy ireo, ny mpivarotra dia mila mandinika ireo metrika izay manazava ny fomba nandraisan'ny mpanjifa mety, mpanjifa ankehitriny, mpandalina ary maro hafa ny hetsika. Ho an'ny mpitantana, ny fahafantarana ny fomba hanatsarana ny zava-misy amin'ny ankapobeny dia afaka manampy amin'ny famoahana vokatra tsara kokoa amin'ny ho avy.
Ny famoahana ireo metrika ireo dia mora lazaina kokoa noho ny vita. Mba hanampiana ireo ekipa ara-barotra hiantoka ny tetibolan'ny hetsika ho avy dia nanangona metatra telo azon'ireo mpivarotra ampiasaina miaraka amin'ireo CMO-ko.
Fantatra ny marika
Na dia laharam-pahamehana ho an'ny CMO hatrany aza ny laharan'ny varotra sy ny fitarihana vaovao, dia mbola mikarakara ireo metrika hafa ihany koa izy ireo toy ny fanekena marika. Mandritra ny hetsika iray dia ataovy izay hahazoana antoka fa manamarika ireo metrika hafa toa ny fitsidihana tranokala, isan'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety ary nolazaina tao amin'ny media sosialy. Mba hahitana ny vokatr'ireo metrika ireo dia jereo ny fizarana ny feo mialoha sy aorian'ny hetsika raha toa ka nahavita namily ny mpifaninana ianao raha nanatrika ny hetsika. Farany, ny hetsika dia azo ampiasaina hanangonana ny fomba fijerin'ny antoko fahatelo. Diniho ny fampiantranoana fanadihadiana mandritra ny hetsika mba hanehoana ny valiny manodidina ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika na fankatoavana hizara amin'ny CMO anao.
Isan'ny fivoriana stratejika
Isan'andro dia manao fivoriana amin'ny alàlan'ny telefaona isika rehetra. Na izany aza, ny fanokanana fotoana hanaovana fihaonana mivantana dia zava-dehibe mba hanakatonana ny fifampiraharahana. Mandany fotoana handrefesana ny isan'ny fivoriana mifanatrika mifanatrika kalitao mandritra ny hetsikao ary ampitahao amin'ireo isa ireto ny isa:
Fitanana ny mpanjifa: Zava-dehibe ny fahazoana mpanjifa vaovao, fa ny fitazonana ny mpanjifanao ankehitriny dia mety hanana anjara toerana lehibe amin'ny fitazonana ny volanao sy ny fampitomboana ny vola miditra ao aminao. Ny fivoriana ataon'ny olona dia afaka manampy amin'ny fanamafisana ireo fifandraisana ireo ary manomboka resaka ilaina.
Mitombo orinasa: Miaraka amin'ny mpanjifa marobe matetika ny hetsika mitovy aminao, dia ataovy izay hitrandrahana ity fotoana ity hananganana fifandraisana sy hampitomboana ny orinasa ao anaty kaonty efa misy.
Nakatona ny fifanarahana: Manana refy ve ianao hanehoana firy ny fihaonana mivantana nifanatrika tamin'ny fifanarahana nakatona? Inona koa no nandray anjara tamin'ny famaranana izany fifanarahana izany? SME manokana sa mpanatanteraka? Amin'ny fananana an'ity fampahalalana ity dia afaka manomana drafitra ho an'ny hetsika amin'ny ho avy ianao.
Ny fampifanarahana eo amin'ny varotra sy ny varotra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fitarihana fitarihana, fanidiana ny fifampiraharahana ary farany, fampitomboana ny vola miditra. Ny fisehoan-javatra dia manome ny ekipa mpivarotra sy marketing fivarotana iray mijanona eo amin'ny tsipika farany ambany amin'ny orinasa iray. Mba hampisehoana an'ity amin'ny CMO, aza hadino ny mandrefy ireto metrika mifantoka amin'ny fidiram-bola ireto:
Isan'ny fampisehoana: Mazava ho azy fa hiantoka fitarihana amin'ny hetsika ny orinasa, saingy mahafeno fepetra hatrany ve ireo fitarihana ireo? Aza manara-maso fotsiny ny isan'ny fitarika amin'ny hetsika fa manara-maso ny isan'ny demo efa vita. Izany dia afaka manome ny ekipa fahitana mazava momba izay mety ho mpanjifa tena liana amin'ny vokatra ary afaka mitsitsy fotoana ho an'ny ekipa mpivarotra. Ho fanampin'izany, ity metrika ity dia afaka mampiseho ny CMO ny anjara toeran'ny hetsika tamin'ny fampisehoana ny demo.
Fahombiazan'ny fivoriana: Ny fanarahana ny isan'ny fivoriana voalahatra izay navadika ho fanararaotra dia afaka mampiseho izay solontenan'ny mpivarotra mahomby indrindra amin'ny firosoana amin'ny fifanarahana. Ity metrika ity dia tsy zava-dehibe amin'ny CMO anao ihany, fa amin'ny lohan'ny varotra ihany koa mba hahafahan'izy ireo mahazo fahatakarana tsara ny tanjaky ny solontena tsirairay. Ity fampahalalana ity dia afaka manampy ny mpivarotra hametraka tsara kokoa mandritra ny dian'ny mpanjifa sy hanome fahafantarana izay tokony hanatrika hetsika amin'ny ho avy.
Haben'ny varotra: Ny fahombiazana amin'ny hetsika dia tsy refesina matetika amin'ny isan'ny fifanarahana nakatona. Raha tokony hampifantoka ny sainao amin'ny fifampiraharahana lehibe kokoa izay mazàna manana tahan'ny fahombiazana ambany kokoa ary maharitra fotoana fohy hanidiana azy ireo, jereo hatrany ny haben'ny fifanarahana antonony mba hahafahanao manampy amin'ny fanondroana ireo vinavina izay ny persona mpanjifa mety indrindra amin'ny làlana tsara.
Ny mpitantana rehetra dia entin'ny valiny. Ny fandaniana fotoana mialoha, mandritra ary aorian'ny hetsika hanadihadiana izay mandeha sy izay afaka manatsara dia hanome fahatakarana tsaratsara kokoa ny mpivarotra, ny mpandrafitra ny hetsika ary ny tompon'andraikitra amin'izay fanovana tokony hatao mba hahombiazan'ny hetsika amin'ny ho avy. Amin'ny fampiharana fomba iray tarihan'ny metatra, ireo mpivarotra dia hanana fotoana mora kokoa hanamarinana ny fampiasam-bola amin'ny hetsika, tsy hamela ny ekipa mpitarika safidy hafa afa-tsy ny fampitomboana ny tetibola ho an'ny hetsika ho avy.
Tags: b2bfanekena marikamarketing amin'ny fihaonambefahazoana mpanjifafitazonana ny mpanjifanakatona ny fifanarahanahetsika marketingKonferansa momba ny marketingfahombiazan'ny fivorianafivarotana fivarotanafivoriana stratejika
Ravi Chalaka dia CMO an'ny Jifflenow ary manam-pahaizana momba ny fampandrosoana ny varotra sy ny fandraharahana, izay mamorona sy manatanteraka tetikady fandraharahana, miteraka fangatahana ary mampiakatra ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika / vokatra amin'ny tsena mifaninana. Amin'ny maha VP an'ny Marketing amin'ny orinasa teknolojia lehibe sy kely, Ravi dia nanangana ekipa matanjaka sy marika ary nahatonga ny fitomboan'ny vola miditra haingana ho an'ny vahaolana marobe miorina amin'ny lozisialy Big Data, SaaS, AI ary IoT, HCI, SAN, NAS. Ravi dia manana mari-pahaizana MBA amin'ny Marketing sy Finance ary mpitondra tenin'ny indostria manam-pahaizana sy mpanolotra
Ny faritra fivarotana dia mahatonga ny varotra varotra ivelan'ny varotra ho azo antoka